Wararka - Shan isbeddel oo yaryar si kor loogu qaado waxtarka dhirta
Shan isbeddel oo yaryar si kor loogu qaado waxtarka dhirta
Qiimaha tamarta ee lagu wado matoor koronto in ka badan toban sano waa ugu yaraan 30 jeer qiimaha asalka ah ee iibsiga. Iyadoo isticmaalka tamarta uu mas'uul ka yahay inta badan nolosha oo dhan, Marek Lukaszczyk oo ka tirsan mootada iyo soo saaraha wadista, WEG, wuxuu sharxayaa shan siyaabood oo lagu wanaajiyo waxtarka tamarta mootada. Waad ku mahadsan tahay, isbeddelada dhirta maahan inay noqdaan kuwo weyn si loo uruuriyo keydka. Qaar badan oo ka mid ah isbeddeladani waxay ku shaqeyn doonaan raadadkaaga iyo qalabkaaga jira.
Inbadan oo matoorrada korontada ku shaqeeya ah waa kuwo waxtarkoodu hooseeyo ama aan si sax ah loogu cabbiri karin arjiga. Labada arrimoodba waxay keenaan in matoorradu u shaqeeyaan si ka adag sidii ay u baahnaayeen, iyagoo adeegsanaya tamar badan hawsha. Sidoo kale, matoorradii hore ayaa laga yaabaa in dib loo soo celiyo dhowr jeer intii lagu jiray dayactirka, taasoo yareyneysa waxtarkooda.
Xaqiiqdii, waxaa lagu qiyaasaa in mootadu lumiso hal ilaa laba boqolkiiba waxtarka mar kasta oo dib loo soo celiyo. Sababtoo ah isticmaalka tamarta ayaa ka dhigan boqolkiiba 96 wadarta qiimaha wareegga nolosha ee mootada, bixinta dheeraadka ah ee waxtarka sare ee mashiinka waxay keeneysaa soo celinta maalgashiga cimrigiisa.
Laakiin haddii matoorku shaqeynayo, oo uu shaqeynayay muddo tobanaan sano ah, miyay u qalantaa dhib ka dib in kor loo qaado? Iyada oo alaab-qeybiyeha saxda ah, habka cusbooneysiintu uusan carqaladeynayn. Jadwal horey loo sii qeexay ayaa hubinaya in isdhaafsiga mootada si dhaqso leh loo sameeyo isla markaana waqtiga ugu yar la joogo. Ka doorbidida raadadka heerka warshadaha waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta hanaankan, maadaama qaabka warshadu u baahnaan doonin wax ka beddelid.
Sida iska cad, haddii aad boqolaal mootooyin ku dhex haysatid xaruntaada, macquul maaha inaad ku beddesho hal mar. Bartilmaameedka matoorrada lagu soo rogay dib-u-rogista marka hore isla markaana qorshee jadwalka beddelaadda in ka badan laba illaa saddex sano si looga fogaado waqti-lumis weyn.
Qalabka dareeraha waxqabadka
Si ay u ilaaliso matoorrada si habsami leh, maareeyayaasha dhirta ayaa rakibi kara dareemayaal dib-u-hagaajin ah. Iyada oo leh cabbiraadyo muhiim ah sida gariirka iyo heerkulka oo lala socdo waqtiga-dhabta ah, oo lagu dhisay falanqaynta dayactirka saadaalinta ayaa tilmaami doonta dhibaatooyinka mustaqbalka ka hor guuldarada. Iyadoo la adeegsanayo codsiyada dareemayaasha ku saleysan dareeraha xogta mootada ayaa la soo saaraa loona diraa taleefanka casriga ah ama kaniiniga. In ka badan gudaha Brazil, hal warshad wax soo saar ayaa ku hirgalisay tikniyoolajiyadan matoorrada wada afar mashiin oo isku shaandheyn hawo ah. Markii ay kooxda dayactirka heshay digniin ah in midkood uu leeyahay heerar gariir badan marka loo eego marinka la aqbali karo, feejignaantooda sareysa ayaa u suuragelisay inay xalliyaan dhibaatada.
Aragtidan la'aanteed, xidhitaanka warshad lama filaan ah ayaa soo bixi lahayd. Laakiin meeye keydadkii tamarta ee aan soo sheegnay? Marka hore, gariirka oo kordhay waa isticmaalka tamarta oo la kordhiyay. Cagaha adag ee isku dhafan ee mootada iyo qallafsanaanta farsamada wanaagsan ayaa muhiim u ah dammaanad qaadka gariirka. Iyadoo si dhakhso leh loo xallinayo waxqabadka aan fiicnayn, tamarta lumisay ayaa lagu ilaaliyay ugu yaraan.
Marka labaad, adoo ka hortagaya warshad buuxda oo la xiro, shuruudaha tamarta sare ee dib loogu bilaabo mashiinnada oo dhan looma baahnayn.
Ku rakib jilbaha bilowga ah
Mashiinnada iyo matoorrada aan sida joogtada ah u socon, maareeyayaasha warshaddu waa inay ku rakibaan bilowga jilicsan. Qalabkani wuxuu si ku-meel-gaadh ah u yareeynayaa culeyska iyo miisaanka ku jira tareenka korantada iyo korantada korantada ee korantada inta lagu guda jiro bilowga.
Ka fikir tan inaad joogtid nalka cas ee taraafikada. In kasta oo aad cagtaada ku garaaci karto barta gaaska marka nalka cagaar noqdo, waad ogtahay inay tani tahay hab aan fiicnayn oo farsamo ahaan walaac leh oo loo wado - iyo waliba khatar.
Sidoo kale, qalabka mashiinka, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayuu u isticmaalaa tamar yar wuxuuna keenaa culeys farsamo oo yar xagga matoorka iyo usheeda dhexe In ka badan cimriga mootada, bilowga jilicsan wuxuu bixiyaa keyd kharash ah oo loo aaneynayo kharashka tamarta oo yaraaday. Qaar ka mid ah bilawga jilicsan ayaa sidoo kale ku dhisay tamarta otomaatiga ah. Ku habboon codsiyada kombuyuutarka, bilowga jilicsan ayaa xukumaya shuruudaha xamuulka wuxuuna hagaajiyaa si loo ilaaliyo kharashka tamarta ugu yaraan.
Isticmaal xawaare is bedbeddelaya (VSD)
Mararka qaarkood waxaa loogu yeeraa isbadalka darawalada isdabajooga (VFD) ama inverter drive, VSDs waxay hagaajinayaan xawaaraha matoor koronto, iyadoo ku saleysan shuruudaha dalabka. Xakamayntaas la'aan, nidaamku wuxuu si fudud u xakameynayaa markii xoog loo baahdo, oo laga eryo tamarta lumay kuleylka. Codsiga taageereyaasha tusaale ahaan, VSDs waxay yareeyaan qulqulka hawada sida shuruudaha looga baahan yahay, halkii ay si fudud uga goyn lahaayeen qulqulka hawada iyagoo ku sii jiraya awoodda ugu badan.
Isku dar VSD leh mootada waxtarka sare leh iyo kharashyada tamarta ee dhimay naftooda ayey u hadli doonaan. Codsiyada munaaradda qaboojinta tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo W22 IE4 super premium mooto leh CFW701 HVAC VSDMarka si habboon loo cabbiro, waxay bixisaa dhimista qiimaha tamarta illaa 80% iyo celceliska keydka biyaha ee 22%.
In kasta oo qawaaniinta hadda jira ay sheegayaan in matoorada IE2 ay tahay in loo isticmaalo VSD, tani way adkaatay in laga hirgeliyo warshadaha oo dhan. Tani waxay sharraxaysaa sababta xeerarku u sii adkaanayaan. Laga bilaabo Julaay 1, 2021, sedex matoorro waji ah ayaa u baahan doona inay la kulmaan heerarka IE3, iyadoon loo eegin wixii lagu daro VSD.
Isbeddelada 2021 waxay sidoo kale ku hayaan VSDs heerar sare, iyagoo u xilsaaraya qiimeyntan kooxdan IE sidoo kale. Waxaa laga filayaa inay la kulmaan heerka IE2, in kasta oo wadista IE2 aysan metelin waxtarka u dhigma ee matoorka IE2 - kuwani waa nidaamyo qiimeyn oo gooni ah.
Si buuxda u isticmaal qalabka VSDs
Ku rakibida VSD waa hal shay, u isticmaalkeeda awooddeeda buuxda waa mid kale. Qaar badan oo ka mid ah VSD-yada waxaa ka buuxa waxyaabo faa iido leh oo maareeyayaasha dhirta aysan ogeyn inay jiraan. Codsiyada bamka waa tusaale wanaagsan. Maaraynta dareeraha waxay noqon kartaa buuq, inta u dhaxeysa daadashada iyo heerarka dareeraha oo hooseeya, waxaa jira waxyaabo badan oo khaldami kara. Xakamaynta gudaha waxay awood u siineysaa isticmaalka wax ku oolka ah ee matoorrada ku saleysan baahida wax soo saarka iyo helitaanka dareeraha.
Ogaanshaha tuubada otomaatiga ah ee VSD waxay aqoonsan kartaa aagagga dheecaanka dareeraha waxayna hagaajinayaan waxqabadka mootada si waafaqsan. Intaa waxaa dheer, ogaanshaha bamka qalalan macnaheedu waa haddii dheecaanku dhammaado, mootada si otomaatig ah ayaa loo joojiyaa oo digniin bamka qalalan ayaa la soo saaraa. Labada xaaladoodba, matoorku wuxuu yareeyaa isticmaalkiisa tamarta marka loo baahdo tamar yar si uu u maareeyo ilaha jira.
Haddii loo adeegsanayo matoorro badan dalabka bamka, xakamaynta mashiinka jockey wuxuu kaloo hagaajin karaa isticmaalka matoorro cabbirkoodu kala duwan yahay. Waxay noqon kartaa in dalabku u baahan yahay mootar yar in la isticmaalo, ama isku-darka mootada yar iyo weyn. Pump Genius wuxuu siinayaa dabacsanaan kordhay si loogu isticmaalo mashiinka cabirka ugu fiican heerka socodka la siinayo.
VSD-yada xitaa waxay sameyn karaan nadiifinta otomaatiga ah ee qalabka korontada, si loo hubiyo in xaalufinta si joogto ah loo fuliyo. Tani waxay mashiinka ku haysaa xaalad aan fiicnayn oo saamayn togan ku leh waxtarka tamarta.
Haddii aadan ku faraxsaneyn inaad bixiso 30 jeer qiimaha makiinadda biilasha tamarta muddo toban sano ah, waa waqtigii aad ku sameyn lahayd qaar ka mid ah isbeddeladan. Iyagu ma dhici doonaan habeennimo, laakiin qorshe istiraatiijiyadeed oo bartilmaameedsanaya dhibcahaaga ugu wax ku oolka badan ee xanuunka ayaa sababi doona faa'iidooyin wax ku ool ah oo waxtar leh.